Imibuzo evame ukubuzwa - Ningbo Pntek Technology Co., Ltd.
Dinga usizo? Sicela uxhumane nathi ngesikhathi sokuphendula imibuzo yakho！
Q: Ayini amanani akho?
A: Izintengo zethu zingashintsha ngokuya kokuphakelwa nezinye izinto zemakethe. Sizokuthumelela uhlu lwamanani olusha ngemuva kokuthi inkampani yakho ixhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.
Q: Ingabe unayo ubuncane be-oda ubuncane?
A: Yebo, sidinga yonke imiyalo yamazwe omhlaba ukuthi ibe nobuningi obu-oda obuqhubekayo. Uma ufuna ukuthengisa kabusha kodwa ngamanani amancane kakhulu, sincoma ukuthi uhlole iwebhusayithi yethu.
Q: Ungakwazi yini ukunikeza imibhalo efanele?
IMP: Yebo, singanikeza ngemibhalo eminingi kubandakanya Izitifiketi Zokuhlaziywa / Ukuvumelana; Umshuwalense; Umsuka, neminye imibhalo yokuthekelisa lapho kudingeka khona.
Q: Yisiphi isilinganiso sesikhathi sokuhola?
A: Ukuze amasampula, isikhathi phambili cishe izinsuku ezingu-7. Ngokukhiqizwa ngobuningi, isikhathi sokuhola izinsuku ezingama-20-30 ngemuva kokuthola inkokhelo yediphozi. Izikhathi zokuhola ziqala ukusebenza lapho (1) sesitholile idiphozi yakho, futhi (2) sinemvume yakho yokugcina yemikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu zokuhola zingasebenzi nomnqamulajuqu wakho, sicela udlule izidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukwamukela izidingo zakho. Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza njalo.
Q: Yiziphi izinhlobo zezindlela zokukhokha ozamukelayo?
IMP: Ungakhokha ku-akhawunti yethu yasebhange, iWestern Union noma i-PayPal: 30% idiphozi kusengaphambili, ibhalansi engu-70% uma kuthelekiswa nekhophi ye-B / L.
Q: Iyini iwaranti yomkhiqizo?
A: Siqinisekisa izinto zethu nokusebenza. Ukuzibophezela kwethu kukwaneliseka ngemikhiqizo yethu. Kwiwaranti noma cha, kuyisiko lenkampani yethu ukubhekana nokuxazulula zonke izingqinamba zamakhasimende ezenelisa wonke umuntu.
Q: Uyakuqinisekisa ukulethwa okuphephile nokuvikelekile kwemikhiqizo?
A: Yebo, sihlala sisebenzisa ukupakisha ukuthekelisa kwekhwalithi ephezulu. Siphinde sisebenzise ukupakisha okuyingozi okukhethekile kwezimpahla eziyingozi kanye nabaqinisekisi bokugcina abandayo abagunyaziwe bezinto ezizwela ukushisa. Ukupakisha kwangochwepheshe nezidingo zokupakisha ezingejwayelekile kungahle kubangele inkokhelo eyengeziwe.
Q: Kuthiwani ngemali yokuthumela?
A: Izindleko zokuthumela zincike endleleni okhetha ngayo ukuthola izimpahla. I-Express imvamisa iyindlela eshesha kunazo zonke kepha futhi ebiza kakhulu. Nge-seafreight yisisombululo esihle kakhulu semali enkulu. Amanani ezimpahla ngqo singakunika wona uma sazi imininingwane yenani, isisindo nendlela. Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.